၂၀၂၂မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ? ကြိုက်တဲ့အရောင်တစ်ခုကိုရွေးပီး ဖတ်ပါ…
December 24, 2021 sonsonlinlin 0
၂၀၂၂မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ? ကြိုက်တဲ့အရောင်တစ်ခုကိုရွေးပီး ဖတ်ပါ။ (1)၂၀၂၂မှာ ရွေးချယ်စရာလမ်းစ၂ခု ပေါ်လာနိုင်ပီး ငါဘာကိုရွေးချယ်ပီး ရှေ့ဆက်ရမလဲ လမ်းပျောက်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေပပျောက်သွားပီး မိမိအတွက် လမ်းပြပေးမယ့်သူမျိုး၊ ချစ်သူရည်းစားရတာ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်ရတာ စသဖြင့် မိမိအပေါ် ဦးဆောင်လမ်းပြပေးမယ့်သူပေါ်လာနိုင်တယ်။ ငွေကြေးအခက်အခဲတွေပပျောက်သွားပီး ကံကြောင့်ငွေဝင်တတ်တာမို့ ထီထိုးတာမျိုး၊ ကံစမ်းတာမျိုးလုပ်သင့်တယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုခုသင်ယူတတ်ရပီး သင်တန်ကောင်းတွေတတ်ဖြစ်တာ၊ ဖက်ရှင်၊ ဒီဆိုင်နာ၊ ဘာသာစကား၊ skillတစ်ခုခု သင်ယူရတတ်တာမို့ အနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေကတော့ အကောင်းမွန်ဆုံး နှစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရာထူးတိုးတာ၊ လစာတိုးတာ၊ […]
ခရီးသွားတိုင်း ကားမူးတတ်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးတွေ
ခရီးသွားတိုင်း ကားမူးတတ်သူတွေအတွက် အဖိုးတန် နည်းလမ်းလေးတွေ ကားမူးတာက အတော်ကို ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာပါ။ ဘယ်သွားသွား လိုရာခရီး မရောက်မချင်း လှိမ့်နေအောင် ခံနေရတာလည်း အတော်ဆိုးပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို ခရီးထွက်ဖို့တောင် ရှောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ခရီးကလည်း ထွက်ရင် ကားကလည်း မမူးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေနေစေဖို့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို လုပ်လို့ ရပါတယ်။ (၁)ဂျင်း ချင်းက ကားမူးတဲ့ဝေဒနာအတွက်တော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ချင်းက ကားမူးတဲ့ ဝေဒနာမျိုးကို သက်သာစေတဲ့အတွက် […]
ချွတ်ရခက်ပြီး ဂျွတ်တက်နေတဲ့ လည်ပင်း ကချေးတွေကို မိနစ်၂၀အတွင်း ပျောက်သွားစေ မယ့်နည်း လည်ပင်း ၊ ဂုတ်မည်းခြင်းက တော်တော်ကြည့် ရဆိုးတဲ့ ကိစ္စပါ ။ မိန်းကလေးတွေ ဆိုရင်လည်း လည်ပင်းပြဲပြဲ လေးေ တွဝတ်ရင် လည်တိုင် လေးကြည်လင်ပြီး ဂုတ်ပိုးလေးတွေ ဖြူဝင်းနေမှ ကြည့်ကောင်း တာပါ ချေးတွေ ကြောင့် လည်ပင်း ၊ ဂုတ်တွေ မည်းနေခြင်းက အမြင်အားဖြင့်လည်း မတင့်တယ် လှပါဘူး ။ […]
ဆန္ေဆးေရနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ္ၾကည့္ပါ
ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖြစ်အောင် လျှော်ကြည့်ပါ ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ကြမယ် ဆန်ဆေးရေ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားတဲ့ဆန်ကို ထမင်းအဖြစ်မချက်ခင်မှာ ရေနဲ့ ဆန်ကို ဆေးရာကနေ ရတဲ့ ရေပါ။ကျွန်တော်တို့ အတော်များများကတော့ ဆန်ဆေးရေကို သွန်ပစ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ရှေးယခင်ကတည်းက ဆန်ဆေးရေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုသိပြီး ဆန်ဆေးရေကို အလှအပအတွက်သုံးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ်။သုတေသနပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Heian ခေတ် (794 AD […]
မ်က္ႏွာေလး ဝင္းမႊတ္ေနဖို႔ ပိုက္ဆံမကုန္တဲ့ ေပါင္းတင္နည္းေလးပါ
မျက်နှာလေး ဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်စုံဆိုင်တွေ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ တကူးတကရှာစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အလှအပ ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ အမျိုးသမီးတိုင်း နူးညံ့ပြီး လှပစိုပြေတဲ့ အသားရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ သိပ်သေချာတာပေါ့။ အသားအရေကိုနုပျို စိုပြေစေဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဒီကနေ့မှာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းအကျိုးထူးတာမို့ စာဖတ်သူတို့အတွက် […]